Ụbọchị My Pet » Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị – Ndi Sabotaging Onwe Gị?
site Julie Ritchie
emelitere ikpeazụ: Jan. 13 2021 | 5 min agụ
"Anaghị m achọ ịlụ" bụ a okwu m na-anụ m ndị nwanyị ahịa isibịghike. Nke a na-ezighị ezi àgwà kwupụta mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ otu n'ime isi ihe mere na otu nwanyi nwere ike ịnọ 'rapaara' na otu ruo nnọọ ogologo oge. Ọtụtụ n'ime ndị inyom m abịa gafee m ịnye ọzụzọ omume obibia akpa na kpamkpam na-ezighị ezi uche set, nke pụtara na otú ha obibia akpa n'ezie sabotages ha Ohere nzute ha ndụ ibe.
Ma àgwà a bụ kpam kpam ihe kwere nghọta. Anyị na-niile e, 'Ese' anyị onwe anyị na-esi na egwuregwu, ịbanye ruo online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị, trawling site ozi nke eme mgbe ụfọdụ ka akpụkpọ iri ari, kwa mgbe mgbe malite mgbe ndị ikom lụrụ nwunye na ndị ọzọ na undesirables, na-emecha na-enye onye a ohere n'ihi na ọ na-ese mma. Ime kọntaktị, akparị ụka azu azu na n'ihu, ikekwe ọbụna na-amalite na-a filika nke obi ụtọ - o yiri mma, ọ bụ nnọọ ezi na-achọ na foto ma na e nwere anya njikọ. Ya mere, ị na-eme ndokwa a nzukọ. Ị bụ ụjọ, ị na-eji nza nke oge na ume na-njikere, ị na-eche ma ọ bụrụ na ị na-eme a ndudue, ma ị na-eme mgbalị, sere na gị uwe, pụọ gaa oyi na-aga ebe ọ bụla (ezi mgbe a awa ole na ole ọbụna) izute gị ụbọchị. Ị na-enwe mmetụta obi ụtọ ugbu a, mgbe niile o nwere ike ịbụ 'onye'.
Ma mgbe ahụ ị na-ahụ ya! Obi gị tụlee n'ihi na ọ na-ese Ọ DỊGHỊ dị ka ya foto, N'eziokwu ọ bụ ọzọ 'Shrek' karịa 'Becks'. Ọ bụ abụọ sentimita asatọ mkpumkpu karịa ọ sị na ọ bụ, na ndị na-foto e doro anya na e ọtụtụ afọ gara aga ikpe ikpe site mmezi arọ na iche enweghị ntutu! Otú ọ dị gị weakly dozie ka 'na-agbalị' na-enye ya ohere, M pụtara na ị bịara ụzọ niile ebe a! E nwere ihe dị ukwuu ndọta dị ka ị ga na-eche na a soggy kabeeji na ị ozugbo amalite na-eme atụmatụ gị ụzọ mgbapụ. Ma ị na-achọghị na-akparị ya mere na ị nọdụ site anwụọkwa hour nke ihere, mkparịta ụka banyere ihe ọ bụla ukwuu, na ndị niile na oge ị na-dị nnọọ itching pụọ. Njikọ ahụ bụ n'ebe online bụ dịghịkwa ebe a hụrụ na ị na-n'ụzọ doro anya ma na-eche iru ala. Dị ka ị na-ahapụ na mmiri ozuzo ị na-eche ihe mere na ị nọrọ oge, ego na mgbalị na-abịa na ọzọ ụbọchị na ị gaba n'ụlọ mmetụta edikpu na ọbụna karịa gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na nkwenkwe na e nnọọ na-adịghị ihe ọ bụla ezigbo ndị ikom si n'ebe ị! Ọ na-sịkwa inyom na-nri.
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike na-na-akụda mmụọ na ọ na-adị mfe demotivated. Ọ nwere ike na-eche agwụ na ọbụna obi wrenching gaa na a eriri nke ụbọchị na ndị mmadụ na ị na-eche ọ ebua na, na gị na-enwe olileanya nzute a onye dashed ugboro ugboro. E nwere ihe ize ndụ nke oké ike ọgwụgwụ mgbe ị na-eme a otutu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike nnọọ akpanikọ na ọbụna jaded. Nke a na-agaghị enyere gị ọnọdụ mgbe niile n'ihi na mgbe ọ bụ na a mode, a otu nwaanyị nwere ike mfe uche ya Mr Right kpam kpam mgbe ọ na-abịa, tinyere.
Ị maara na ọtụtụ ndị inyom na-eme n'ezie fancy onye na ha mesịrị gaa na ịlụ di na nwunye mgbe mbụ ha izute ya? Nti! A na-adịbeghị anya na-amụ na The Daily News na-eme atụmatụ na gburugburu 22% nke di na nwunye izute site ọrụ. Nke a bụ ihe ọ bụla mberede – ọ bụ n'ihi na mma a na-ekwe ka ewu ndammana, oge n'aga. Ma ọtụtụ ikpe ọ bụ mgbe onye na ị ga-emeghi nyere ohere ka ọ bụrụ na i zutere ya online, ihe iburu n'uche ka ị na-nēwere site na gị ọkụ.
Ya mere ihe na-eme mgbe ahụ ịgbanwe ihe a na-adịghị mma mmetụta banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị?
Ọfọn N'eziokwu a dị mfe nnofega ke anya bụ ihe niile dị mkpa iji gbanwee dum ahụmahụ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị onwe gị mere na ị pụrụ n'ezie na-amalite obi ụtọ na ya, na i nwere ike na-akpọ gị onye ọsọ ọsọ karị. Ọ bụrụ na ndị inyom nwere ike malite elele mkpakọrịta nwoke na nwaanyị dị ka 'fun omume'Ha ga-a otutu ihe ịga nke ọma, na-ha ga-enwe usoro a otutu ihe. Ya mere, ihe kpọmkwem 'fun omume'Pụtara?
Ndị a TOP ARO ga-agwa gị otú ị na-eji 'fun omume ' obibia ihe ịga nke ọma.
1. Idebe burukwa.
Ị na-eche banyere ya dị ka a nwere ndụ ibe, kama dị nnọọ enwe ugbu a na oge a na nke a mmadụ ọhụrụ, na-achọ ịmata ihe ya. Ọ bụ naanị otu ụbọchị – e nweghị nkwa nke a mmekọrịta ma ọ bụ alụmdi na nwunye - ọ bụ nnọọ a kọfị, ma ọ bụ a ije ma ọ bụ ihe ọ bụla ị na-eme ọnụ. Uru ebe a bụ abụọ, apụ ọ ga-ewe niile nrụgide anya nke mere na ị nwere ike ma zuo, ọ ga-eche na. Kasị mma bụ ndị ụjọ na-atụ na mbụ ụbọchị na adịghị eweta onwe ha na ha kasị mma, Otú ọ dị nke a ga-enyere ya ala. Nke abuo ị ga-esi na-eme ịbụ gburugburu ndị na-amasị gị, nke pụtara na gị ùgwù onwe onye na-aga, na mgbe 'nwoke gị' adịghị egosi na elu ị dị njikere maka ya n'ihi na unu na-'a eke'.
2. Nọgidenụ na-mbụ ụbọchị nnọọ mkpụmkpụ.
Unu na-anabata nri abalị ụbọchị nke mbụ ole na ole ụbọchị n'ihi na ha bụ kwa ogologo na-emefu na onye ị na-amaghị. Otu awa mgbe ọ bụla bụ ọtụtụ na-emefu na di na nwunye mbụ nke nzukọ. Short na impactful bụ ihe anyị na-aga n'ihi na ebe a. Nke a ga-enyere gbochie oké ike ọgwụgwụ kwa mgbe ị na-akpa ọtụtụ ndị ozugbo na mmalite.
3. Adịghị ekwurịta okwu online na ndị mmadụ na-ebi ndụ dị nnọọ anya n'ebe unu.
A na-azọpụta a otutu nke ike na-akpata obi mgbawa. Nwere a na-achị naanị ụbọchị ndị na-obodo gị (n'ime hour njem anya n'elu). Ọtụtụ online saịtị nwere atụmatụ ebe ị pụrụ nụchaa nsonaazụ ọchụchọ gị naanị na-agụnye ndị n'ime a ụfọdụ anya. Cheta na ị na-maara n'ezie onye ruo mgbe ị izute ha na onye, otú e nwere mgbe a njikọ online na dị nnọọ bụ n'ebe mgbe unu zutere ihu na ihu. M na-akwadokwa ọchịchị nwoke na-aga nwanyị nke ụbọchị.
4. Izu Ike na-enwe ụbọchị. Nwee anụrị!
Kpachara Anya Maka – nke a apụtaghị na-aṅụ a truckload mmanya! Ọ bụ ezie na m na-eme ịghọta ihe mere ndị mmadụ dị ka ihe ọṅụṅụ na mbụ ụbọchị ọ ka mma na-ezere kpam kpam ma ọ bụ arapara nanị otu ke akpa ụbọchị nke mere na ị pụrụ n'ezie ịdị doro anya isi na-ahụ otú ị na-eche na ụbọchị a, na-enweghị mmanya na-enye ihe a Rosy tint. Kama ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọpụta ihe na-akpali banyere ya, onye ọ bụla nwere ihe!
5. Nye ya a ohere.
Nke a pụtara na ọ na-a abụọ ụbọchị ma ọ bụrụ na ọ na-ajụ n'ihi na otu onye, bụrụhaala na ị na-eche ya na ya. Ị na-enye ya na nke a ohere ọbụlagodi na ị na-eche ya masịrị. Ee n'ezie! Nke a bụ akụkụ dị mkpa nke usoro, karịsịa n'ihi na ndị inyom bụ ndị nwere ụkpụrụ nke ihe ọjọọ mmekọrịta na buru bụ ndị na-adịghị mma.
6. Ka ya na-edu
Nke a nile bụ akụkụ nke m n'ozuzu ịgakwuru maka ndị inyom na-na-achọ obi ụtọ mmekọrịta. Ya mere, na pụtara na ọ ga-abụ onye na-arịọ maka a abụọ ụbọchị, ma ọ bụrụ na e nwere ịbụ otu. M na-akwadokwa ọchịchị na ọ na-akwụ n'ihi na nke a na-enyere ịtọlite ​​mmekọrịta ike n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ ezie na m na-aghọta na nke a bụ controversial ụfọdụ ndị. Ladies na ị chọrọ ka a dike nri?
7. Mee zuru ezu n'eziokwu banyere otú ị na-enwe mmetụta.
Mgbe ị na-na ụbọchị na ndị ikom a na ị bụ n'eziokwu na ị na-ekwu otú obi dị gị, ọbụna ma ọ bụrụ na nke a bụ ihere ime otú na mbụ. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eche Ịnọ nkịtị gwụrụ / ụjọ / agbanyụrịrị / mmasị / obi ụtọ ị pụrụ igosipụta na. Ọ bụghị na a bitchy ụzọ, na-emeghe ma na-eme ihe n'eziokwu ụzọ. Nke a terrifies ụfọdụ ụmụ nwaanyị, ma ị ga-ahụ otú ọtụtụ ndị ikom ga-ewere ya na ha stride ma ghọta n'eziokwu. Plus ọ ga-emepe ụzọ maka ezigbo, n'eziokwu nkwurịta okwu, ma na-enye ya nzaghachi nke bụ ọlaedo ohere maka ya aka ịgbanwe na kwụpụ elu ya egwuregwu n'ihi na ị (ma ọ bụrụ na ọ na-eche na ị bụ kwesịrị ya – ị na-).
8. Nwee courteous, nwere mmasị na nsọpụrụ.
Ị nwere ike na-eche na ọ bụ gị ezigbo mmadụ ma ọ gosiri maka unu na-emeso unu na otu ụbọchị, na na kwesịrị ekele.
Akpa otú a ga-bụghị naanị-enyere gị aka na-enwe ya ọzọ, ma ọ ga-enyere gị aka iru gị 'mmekọrịta muscle' n'ihi na ị ga-enweta na-eme ịbụ onwe gị (a siri ike, nwanyị nwanyị) gburugburu ezigbo ndị ikom. Ma mgbe ị na-eme ihe niile a na nwoke gị ga-egosi mgbe ị na-atụghịdị anya ya!
Soro ndị a n'elu Atụmatụ maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-ahụ otú gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ahụmahụ kpamkpam agbanwe.
5 Ihe Gwa Chetara Ya O kwesịrị Ị